The Ab Presents Nepal » अदालते सफाई दियो, तर नमेटिने दाग! देशका लागि २५ बर्ष योगदान दिएको हुँ ! यसलाई नबिर्सीदिनुस,बाँचेर खाने अवस्था बनाईदिनुहोस!
अदालते सफाई दियो, तर नमेटिने दाग! देशका लागि २५ बर्ष योगदान दिएको हुँ ! यसलाई नबिर्सीदिनुस,बाँचेर खाने अवस्था बनाईदिनुहोस!
काठमाडौं-: अदालते सफाई दियो । तर नमेटिने दाग जिन्दगीमा लाग्यो ।उनी सपनाको स्वर्णिम संसारबाट एक्कासी भुँईमा पछारिए झै भए । जिन्दगी कष्टकर बन्न थाल्यो । नजिकका सम्बन्धहरु टाढिन थाले । परिचित अनुहार बिरानो बन्न थाले । दैनिक आउजाउ हुने घरका ढोकाहरु बन्द भए । कतिले बाटो मोडे, कतिले सम्बन्धहरु तोडे । हिजो जो मान्छे एक भेटका लागि तड्पिन्थे, उनीहरु सत्तोसराप गर्न थाले । जिन्दगी र सम्बन्ध अजिबको हुने रैछ, सागलले बल्ल बुझे ।
उनलाई सबै भन्दा ठुलो समस्या मानिसका अगाडी उभिन भयो । कसरी सम्झाउने, के भन्ने, कसरी आफुलाई निर्दोष देखाउने ? कुनै भेउनै पाएनन् ।‘देश भनेको एउटा चोरले अर्को चोरलाई सहयोग गर्ने ठाउँ रहेछ । जहाँ हामी चोर हुन सकेनौ ।’ सागरको बुझाई यस्तै छ ।
एक समय सागरसंग समेत जीवनमा धेरै विकल्पहरु थिए । तर उनले भने फुटबलको विकल्प देखेनन् । परिक्षा अगाडी हुदाँ फुटबल खोजे । पटक पकट ब्रिटिस लाहुरे भिड्न पोखरा पुग्थे । तर राष्ट्रिय टिमको खेल हुने बित्तिकै काठमाडौंको हान्निहाल्थे ।उनले सपना पालेका थिए, राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने, राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने ।सागर भन्छन्, ‘एक हिसावमा जिवनमा फुटबल बाहेक केही नसोचिएको रैछ ।’
‘फुटबल छाडेर खुल्ला जिवनमा आउँदा हामी शुन्य हुने रहेछौ । केही थाहा नपाएको, केही नजानेको जस्तो हुने रैछ ।’ उनी भन्छन्, ‘सबै थोक हेर्ने, दुनियाँ देख्ने तर जिवन बुझ्न गाह्रो रहेछ । केही ब्यापार गरौ भनेपनि धेरै पैसा नहुने । पैसा लगानी गरौ भन्दा कति ठाउँमा नपुग्ने । त्यही कारणले अगाडी बढ्न नसकिने रहेछ ।’
सागर सहित चार खेलाडीमाथि एएफसीले आजिवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनलाई फुटबलमा फर्कन गाह्रो छ । तर उनले फुटबल बाहेक जिन्दगीमा अरु केही सोचेनन्, केही जानेनन् ।
‘जिन्दगी निकै अफठ्यारो भईरहेको छ । कहाँ पुगेको मान्छे, शुन्यतामा झर्दा उठ्नै निकै गाह्रो भईरहेको छ । एक कदम समेत अगाडी बढ्न सकेको छैन ।’ सागर भन्छन् ।
मान्छेहरु भेट्न आउँछन् । हिम्मत नहार भन्छन् । तर मानिसहरुको ढाडसले सागरलाई छुदैन ।
‘मान्छेहरु अगाडी आएर हाँसेर बोल्छन् । तर उनीहरु दुखी भएर भने जस्तो लाग्दैन । त्यही भएर बाँच्न समेत गाह्रो भईसकेको छ ।’ सागर निराशा पोख्छन् ।सागर जीवनसंग थाकेका छन् । हारेका छैनन् । उनी अझै केही गर्न चाहन्छन् । फुटबलमै केन्द्रित हुन चाहन्छन् । एकेडेमी खोल्न चाहन्छन् । आफुले जानेको फुटबल सिकाउन चाहन्छन् ।तर प्राविधिक रुपमा उनलाई काम गर्न अफठ्यारो छ ।
‘यत्रो बर्ष फुटबल खेलको छु । धेरै राम्रो अवसर आउदाँ फुटबललाई रोजेका छु । व्यक्तिगत रुपमा २०–२५ बर्ष फुटबललाई दिएको छु ।’ सागर भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा केही नहुदाँ व्यक्तिगत रुपमा गाह्रो भईरहेको छ । अब संघले समेत केही गर्दिन पर्यो भन्ने लाग्छ ।’
‘फुटबल संघले समेत मुल्याङ्न गर्दिन पर्यो । हिजो र आजको सागर थापामा फरक छ । फुटबललाई दिएको योगदान बिर्सिएको भान हुन्छ । हामी जस्तो खेलाडीलाई बिर्सिएर फुटबललाई अगाडी बढाउछु भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो ।
यि सबै कथाको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ, के सागर थापाले म्याच फिक्सिङनै गरेका हुन् त ?तर उनी यसलाई ठाडै अस्विकार गर्छन् ।
सन् २००९ बाट राष्ट्रिय टिमको कप्तान गरे । मैले कहिल्यै फुटबल टिममा फिक्सिङ देखिन । सधै सबैलाई समेटेर राखेको हुँ । फुटबलमा नतिजा समेत ल्याएको हो । नेपाललाई फिफा वरियतामा १ सय ३५ औ स्थानमा हामीले पु¥याएको हो । हामी तिनै खेलाडी हौ ।’ सागर दाबी गर्छन्, ‘त्यो समय टिमवर्क थियो । सोही कारण नतिजा आयो । राष्ट्रिय टिममा मैले कुनै फिक्सिङ देखिन र सुनिन ।’सन्यासपछि के गर्ने ? प्राय एन्फाका पदाधिकारी सागरलाई सोध्ने गर्थे ।
‘कोचिङको लाईसेन्स लैजादै गर ।सिनियरहरु सुझाव दिन्थे ।‘म कोचिङ गर्दिन ।’ सागर जवाफ फर्काउथे ।
‘अनि के गर्छस ?’‘संघमा आउछु ।त्यसो भए राजनीतिक गर्छत त ?’ एन्फा पदाधिकारी जिस्काउथे ।अध्यक्ष बनेर फुटबल विकास गर्ने हो ।’सागर आत्मविश्वासले भरिएको जवाफ फर्काउथे ।उनका योजनानै यस्तै थिए ।
सन्यासपछि फुटबलको व्यवस्थापनमा आएर काम गर्ने उनको रहर थियो ।सागर मुडी थिए । चित्त नबुझेको कुरामा सबैसंग बाझ्थे । डर भन्ने रत्ति भए थिएन । सबैलाई मुख छाडेरै गाली गर्थे ।
तर उनी सबैका प्रिय थिए । मैदान भित्र उनीमाथि खोट लगाउने ठाउँ थिएन । हक्की स्वभावका उनीको नेतृत्व शैली गज्जवको थियो ।
तर जिवन एक्कासी सुन्यतामा झर्न पुग्यो । फुटबलमा प्रतिबन्ध छ । अगाडी बढ्ने ठाउँ छैन । फिफा एएफसीको कारबाही अलि बढीनै भयो भन्ने सागरलाई लाग्छ । अदालतले सफाई दिएको छ । तर एएफसीमा अपिल गर्दा समेत निराश बनाएर पठाईदिएको छ ।
सागर अहिले लाचार जस्तै बनेका छन् । विकल्प विहिन छन् । फुटबलको मैदानमा अन्तिम सेकेन्डसम्म लड्ने उनी जिवनसंग हार मान्न थालेका छन् ।उनको अब एउटै आग्रह छ । त्यो आग्रह एन्फासंग छ । उनी चाहन्छन्, एएफसीले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन एन्फाले पहल गरिदियोस । फुटबल संघले चासो देखाईदियोस ।
देशका लागि २५ बर्ष योगदान दिएको हुँ । यसलाई नबिर्सीदिनुस । एन्फा अभिभावका हो । बाँचेर खाने अवस्था बनाईदिनुहोस । एएफसीले प्रतिबन्ध हटाए जीवनमा फेरी धेरै कुरा हुने थियो ।’
त्यसअघि के थिएन सागर थापासंग ?
उमेर थियो । स्टारडम थियो । पैसा थियो । ठुलो नाम थियो ।
जता निस्कियो मान्छेको भिड जम्मा हुने गर्दथ्यो । त्यो समय फुटबल औधी लोकप्रिय थियो । उनी त्यही फुटबलका कप्तान थिए । उनी सागर थापा थिए ।
तर जब म्याच फिक्सिङको घटनामा सागर मुछिए, जिन्दगीले १ सय ८० डिग्रीको फन्को मार्यो ।